Thadagam Road, Edayarpalayam 641025 Kavundampalayam (Coimbatore)
Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore frequently asked questions
What are the food menu & catering options available at Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore?
Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore offers these food menus and cuisine options for events and parties:
What kind of event spaces does Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore have?
At Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore, events can be organised in the following types of spaces:
What services and amenities can Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore provide for an event?
Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore can provide the following services and amenities:
Can Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore provide inhouse vendors for additional services?
Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore can provide the following vendors in-house for any event in the venue:
Does Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore allow external vendors for weddings and other events at their venue?
Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore allows these type of external vendors for the events at their venue:
Which forms of payment are accepted by Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore?
The following mode of payments are accepted by Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore:
How many people can Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore serve at a wedding event?
Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore can host events and offer wedding services for a minimum of 100 and a maximum of 600 guests.
What kind of promotions does Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore offer?
Vasuki Mahal Kalyana Mandapam, Coimbatore currently offers 1 special WeddingWire promotion for wedding services.